Fepetra sy fepetra | AudioSourceRE
Fepetra sy fepetra fampiasana
AudioSourceRE DAC promanolotra ny serivisinay ho anao arakaraka ireto fepetra manaraka ireto. Raha tsy manaiky ireo fepetra ireo ianao dia aza mampiasa an'ity tranonkala ity. Amin'ny fitsidihana Audiosourcere.com, manaiky ianao avy hatrany ireo fepetra ireo.
Izahay dia manana ny zo hanavao na manavao ny fepetra sy ny fepetra apetrakay. Zahao ny fepetra sy ny fepetra azontsika isaky ny misy fanovana. Ny fampiasana ny tranonkalanao tsy tapaka taorian'ny fanovana ireo teny sy ny fepetra dia toa ny fanekena ireo fanovana ireo.
Ny fananana ny votoatin'ny tranonkala
Ny atiny rehetra ato amin'ity tranonkala ity dia ny property ny AudioSourceRE DAC. Ny votoatin'ny tranonkala rehetra dia natao ho an'ny fampahalalana fotsiny ihany ary hovana raha tsy misy fanamarihana.
AudioSourceRE manome anao fahazoan-dàlana voafetra hiditra amin'ity tranonkala ity. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana ara-barotra ny ampahany amin'ity tranokala ity, ao anatin'izany ny reproduction, mivarotra, na mitsidika ny ampahany amin'ity tranokala ity, fampiasana ny profamaritana fantsona sy vidiny, na fampiasana fitaovana fanangonana angona sy fitrandrahana. Tsy manome alalana hanovana ny tranokala na ampahany amin'ny tranokala izany raha tsy mahazo alalana voasoratra avy aminay.
Angon-drakitra sy fampiasana
Raha te hahalala momba ny fanangonana sy fampiasana data AudioSourceRE Azafady mba jerena ny pejinay momba ny fiainana manokana. Audiosourcere.com dia misy rohy mankamin'ny tranonkala hafa izay ampiasainay promanome serivisy ho an'ny mpampiasa anay. AudioSourceRE tsy manana fifehezana ireo tranonkala ivelany ireo ary tsy tompon'andraikitra amin'ireo fanao manokana sy ny atiny amin'ireo tranonkala ireo.
Ny votoatin'ny tranonkala rehetra dia natao ho an'ny fampahalalana fotsiny ihany ary hovana raha tsy misy fanamarihana.
Fampandehanana ireo mpiady sy fetra ny fatiantoka
Ny fitaovana sy ny atiny rehetra azo alaina ao amin'ity tranonkala ity dia provide “as is” sy “as available” hampiasanao. AudioSourceRE tsy manome fahazoan-dàlana na inona na inona karazany, mazava na tsy tiana holazaina, fa ny atiny na inona na inona, toy ny fampahalalana, fitaovana ary profantsona tafiditra amin'ity tranonkala ity dia marina, azo itokisana, na marina, na hoe tsy misy viriosy na singa mampidi-doza hafa ny atiny. Manaiky mazava ianao fa ny fampiasanao an'ity tranonkala ity dia atahorana anao.
Na inona na inona tsy misy AudioSourceRE na ireo manana fahazoan-dàlana dia tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana mivantana na tsy mivantana, manasazy na sendra izay vokatry ny fampiasana an'ity tranonkala ity na ny rindrambaiko profantsona amidy amin'ny alàlan'ity tranonkala ity. Mihatra io fetra io na dia efa nanoro hevitra antsika aza isika fa mety hisy fahasimbana toy izany. Izahay dia manondro anao ny Fifanarahana LICENSING END-USER (EULA) izay azo zahana Eto.
Ireo fepetra fampiasana ireo dia fehezin'ny sy voasoratra mifanaraka amin'ny lalàna ao amin'ny Repoblikan'i Irlanda. Ekenareo mazava tsara fa ny fanapaha-kevitra manokana ho an'ny fitakiana mifandraika amin'ireto andiana fampiasana ireto na fampiasana ity tranonkala ity dia ny rafi-pitsarana Irlandey ary ampandeferinao bebe kokoa ny fitsarana manokana ho an'ny fitsarana toa izany mba hanazavana ny fitakiana.
Profamandrihana fantsona - Fepetra sy fepetra
Fividianana a prony famandrihana fantsona dia midika fa manaiky ianao fa voafatotry ny Fehezan-dalàna momba ny famandrihana ary ny politikan'ny mpanjifa. AudioSourceRE famandrihana profantsona dia tsy azo averina ary tsy misy famerenam-bola aloa isaky ny fe-potoana fisoratana anarana miavaka.
ny Profantsona famandrihana
Ny famandrihana nataonao, na isam-bolana na isan-taona, dia manomboka amin'ny faran'ny fotoam-pitsarana fanadinana 7 andro ary rehefa voamarinay ny antsipirian'ny fandoavanao. Ny datin'ny fandoavanao voalohany dia hofaritana amin'ny fisavana. Ny fisoratanao dia havaozina ho azy amin'ny faran'ny vanim-potoana famandrihana ny anao, ary homena takelaka fanampiny ianao amin'ny vidiny ankehitriny. Raha miova ny vidin'entana dia hanomboka amin'ny fanavaozana ny drafitra famandrihana ny vidinay vaovao. Raha mihena ny fisoratanao, dia tsy afaka mampiasa ny rindrambaiko izahay.
Raha tsy te-hanavao-tena ianao dia mety hanafoana ny famandrihana alohan'ny faran'ny fe-potoana ankehitriny.
Fotoam-pitsapana maimaimpoana 7 andro
Fitsapana 7 andro maimaim-poana no azo DeMIX Pro Famandrihana isam-bolana sy isan-taona. Takiana aminao izany promanamboatra fomba fandoavam-bola ara-dalàna mba hitrandrahana ny fitsarana. Raha tsy manafoana alohan'ny faran'ny 7 andro ianao dia hampandoavinay vola avy hatrany ianao rehefa tapitra ny fitsarana anao.
Ny fe-potoana fitsapana 7 andro dia manomboka rehefa nanamafy ny fahamarinan'ny fomba fandoavanao vola izahay ary manaiky ny fepetra momba ny serivisy sy ny politika momba ny fiainana manokana momba ny fandoavam-bola. provider.
Mba hanafoana ny fitsapana maimaim-poana alohan'ny hahavitan'ny fitsarana anao dia jereo azafady ny Fomba fanohanana anay.
Fahazoan-dàlana maharitra - Fepetra sy fepetra
Ny fividianana fahazoan-dàlana maharitra dia midika fa manaiky ny hifatotra amin'ny fepetra sy ny fepetra ary ny politika momba ny mpanjifa ianao. AudioSourceRE fahazoan-dàlana maharitra profantsona tsy azo averina.
Tsy maintsy mampiasa fomba fandoavam-bola ara-dalàna ianao toy ny carte de crédit na ap ap hafaproved fomba hividianana fahazoan-dàlana. Ny vidin'ny fividianana amin'ny ankabeazan'ny tranga dia aseho amin'ny vola eo an-toerana ary misy ny hetra eo an-toerana sy / na ny sarany amin'ny carte de crédit.
Raha manana fanontaniana na ahiahy momba ny politika ao amin'ity fifanarahana ity ianao, dia iangaviana izahay hifandraisao amin'ny info @ audiosourcere.com.